Hoos u dhac dhaqaale kaalmo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoos u dhac dhaqaale kaalmo
Publicerat torsdag 18 juni 2009 kl 12.20
Dhaqaalaha liita ee caalamka, islamarkaana saameeyey kobaca dhaqaalaha ee dalkan Iswiidhen ayey dad badani ka welwelsan yihiin inuu saameeyo kaalmada dhaqaale ee dalkani u fidiyo dadyoowga tabaaleeysan ee ku dhaqan waddammada soo koreya.
Iswiidhen ayaa sannadkii ugu deeqda waddammada saddexaad dhaqaale gaarsiisan 30 Milyaard ee koronka Iswiidhishka, iyadoona la saadaalineyo inuu dhaqaalahaasi hoos u dhaco ku dhowaad afar milyaard, iyo wax ka badan sannadka foodda innagu soo haya, maadaama uu mucaawimmada uu dalkani bixiyaa ku xiran tahey kobaca dhaqaalaha dalka.
Bo Forsberg, ahna agaasimaha guud ee heyadda Diakonia, ayaa ka wel-welsan, in heyaddiisu ku qasbanaato dhimmidda hoowlo dhaxal gal ah ee mucaawino.
- Haddii go’aankaa uu hirgelo, wuxuu la iman karaa caqabad aan la maleeysan karin, oo uu u geeysto hoowlaha la dagaalanka fakhriga. Waxey middaasi keeni kartaa in gacmaha laga laabto hoowlo la xiriira kaalmada haweenka dhibaateeysan iyo dadyoowga la il-daran cudurka HIV.
Inkastoo aan illaa iyo hadda la ogsooneeyn baaxadda laga jari doono dhaqaalaha kaalmada ee uu dalkani u fidiyo caalamka soo koraya, go’aankeedana la filayo xilliga deeyrta ee foodda innagu soo haya, ayey heyadda marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SIDA, ey u tabaabusheeysaneeysaa middaa.
Sida uu sheegey ku simaha heyadda SIDA, Magnus Lindell, iney muhiim tahey in aaney xaaladdaasi dhibaateeyn waddammada ey iminka caqabadaha kala soo gudboonaadeen dhaqaale xummada caalamka ka jirta.
- Dhaqaalahan kaalmada ee la dhimayo wuxuu cawaaqib xumo ku noqonayaa xiriirka wada-shaqeeyn ee aan la dalalka la leenahey. Lama dhimi karo 12 ilaa iyo 13% dhaqaale kaalmo loogu geeysanayo bulsho uu fakhri hareeyey.
- Hoowshayadu waxey tahey inaan sida ugu wanaagsan u yareeyno caqabadaha ey dhaqaale darradu la iman karto.
Hase yeeshee waa hubaal inaan dhimmi doono, hoowlo macno weeyn ugu fadhiya dadyoow sabool ah.